पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र विप्लव माओवादीलाई निगरानीमा राख्न गृहमन्त्रीको प्रहरीलाई निर्देशन – YesKathmandu.com
काठमाडौं । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र विप्लव माओवादीका गतिविधिमा निगरानी राख्न सुरक्षा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री निधिले निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकमै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका निधिले उनीहरुको गतिविधि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी भएको भन्दै उनीहरुमाथी निगरानी राख्न निर्देशन दिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चिनियाँ, केही भारतीयसँग मिलेर षड्यन्त्र सुरु गरेको सुरक्षा प्रमुखहरुलाई बताए ।
केही सयमदेखि पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले षड्यन्त्र सुरु गरेका छन् । उनी कोसँग भेट्छन् ? र कहाँ जान्छन ? त्यसको निगरानी बढाउनु प्रधानमन्त्रीज्युले पनि यही निर्देशन दिनुभएको छ, सुरक्षा प्रमुखहरुलाई गृहमन्त्री निधिले निर्देशनमा भने त्यस्ता कुनै हर्कत वा भेटघाट भए तत्काल सरकारलाई जानकारी गराउनु ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश बिखण्डनको दिशामा गएको बताउँदै राजनीतिक गतिविधिप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए । पूर्वराजाको बिज्ञप्तीमा सत्तापक्षिय दलहरु बढि सशंकित बनेका छन् । भने राजावादीहरु हौसिएका छन् । यही अवस्थामा पूर्वराजाले कुनैपनि गतिविधि गर्न सक्ने आशंका सरकारले गरेको छ ।
उता भ्रष्टाचारीलाई कालोमोसो दल्ने काम सुरु गरेको विप्लव माओवादीलाई पनि निगरानीमा राख्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । विप्लव माओवादीका गतिविधी अराजक भएको टिप्पनी गर्दै हतियार पनि प्रयोग हुनसक्ने सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएका छन् ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वाेच्च परिसरमा कालोमोसो दलेपछि सरकार सशंकित बनेको हो । अन्य पूर्वमन्त्री र पूर्वकर्मचारीलाई कारवाही हुने सक्ने भन्दै सर्तक रहन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ ।
One thought on “पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र विप्लव माओवादीलाई निगरानीमा राख्न गृहमन्त्रीको प्रहरीलाई निर्देशन”
You bloody basterd Nidhi home Minister, you basterd and Biplab are from same terrorist background! Who authorised you f.to speak against Gyanendra you mf beast ? Mind your pig v.mouth.
नाकाबन्दी खुल्ने चर्चा हल्ला मात्रः रणजीत राय
राष्ट्रपति सवारीको रोचक रिहर्सल
अदालतमा लोकमान प्रकरणसँगै झुटो बोल्नेको पालो